lacagta Ruush | guide currency.net A iswiidishka si ay u iibsadaan lacagta qalaad ee bucshiradaha iyo adeegyada dhoofinta
Home lacagta Ruush RSS
Ruble waa lacagta lacag Ruush
Ruble waa lacagta lacag Ruush. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida lacagta ee Taiwan and iyo Abkhazia oo jira laba xiriirada in ay yihiin qayb ahaan la aqoonsan yahay. Ruble ayaa waxaa hore loo isticmaalaa sida lacagta Midowga Soofiyeeti iyo Empire Ruush ka hor ay ugu dambeyntii kor u qarxay. Dalka of Belarus ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay lacagta ee isku magaca. 100 kopeks dhigi 1 Ruble. Lacagta Ruush ma laha astaan ​​kasta oo si rasmi ah loo isticmaalo, in kastoo “py6” waa soo gaabiyay in si weyn loo isticmaalo. calaamado kala duwan la tixgeliyaa sida ee haatan in ay go'aan ka on astaanta rasmiga ah.
eraygii “Ruble” waxaa laga erayga “rubit” taas oo macnaheedu yahay “si ay u dhinto”. Waagii hore, Ruble ma ahaa run ahaantii lacag ah qabtay; halkii ay ahayd koombo qiimaha iyo miisaanka. Other ka badan kopeks, Ruble ayaa sidoo kale waxaa lagu kala qaybsanyihiin karaa altyn ah (3 kopecks), grivennik ah (10 kopecks), polupoltina ah (25 kopecks), iyo poltina ah (50 kopecks). Waxay ahayd sannaddii 1704 in dowladda Ruush bilaabay soo saarista rubles lacag ah sida lacagta Ruush. 1 Ruble markii hore lagu qiimeeyay 28 GM oo lacag ah, laakiin in ka 1760 ayaa waxaa qiimo tirtay in ay 18 GM oo lacag ah. Intii u dhaxaysay sanadihii la 1756 iyo 1779, lacagta qadaadiicda oo dahab ah ayaa la soo saaray oo u dhaxaysay sannadihii 1770 iyo 1771, qadaadiicda copper ah ayaa soo saaray. Assignatsii, kuwaasi oo ay qoraalo promissory warqad ayaa soo saaray dhexeeya years1769 iyo 1849.
lacagta Ruushka uu maray hoos u dhac weyn ee qiimaha qaraabo in tiro ka mid ah lacagaha kale. Dhab ahaan, dhamaadkii August iyo September hore 2014, waxaa taabtay rikoor hooseyso.
Russia ayaa la silcayey Depression Dhaqaalaha iyo sidoo. Si kastaba ha ahaatee, Dadka waxaa ka lineed ka warqabaan dhibaatooyinka la xiriira a lacagta Ruush qiimo tirtay. qiimaha Ruble ayaa loo oggolaaday in dhici xitaa hoose ka dhanka ah in ka mid ah doolarka iyo euroda. Tani waxaa loo oggolaaday maxaa yeelay, dhaqaalaha Ruush waxaa loola xidhan saliidda, iyo tan iyo saliidna Ganacsi ee $49 foosto ay waxyeelo. Waxaan akhriyey meel in Russia u baahan yahay saliid ahaan ku saabsan $70.00 halkii foosto ee si ay u dheelli ay miisaaniyadda